Car "Lada Kalina" uyisibonelo isabelomali ifektri Russian "AvtoVAZ". Ngaphansi brand name main akusiyo ezivamile emazweni CIS, lapho imoto njengoba Lada 1117, 1118, 1119. I ububanzi onobuhle ukukhiqizwa kufika ngo-2004 eyaziwa, kodwa kwamanye amazwe ukuqaliswa waqala ngokushesha, kodwa ngemva kweminyaka embalwa.
Ukuthengiswa Vaz-1117 (1119 iyona "umzali" imodeli) waqala ngo-2008, kuphela e-Ukraine angaphezu kuka-2 million, onobuhle ngabe athengiswe eminyakeni emibili.
Imoto ifakwe izinhlobo ezimbili zikaphethiloli izinjini. Umehluko phakathi kwazo kusesandleni - 81 89 amahhashi. Ezinye ukushintshwa ube drive akhethekile ukudluliswa ngcono.
Bambalwa abantu abangaphika ukuthi bacabanga ukuthi Vaz-1119 design futhi kuphekwe ungakujabulisi. Ekuqaleni imoto, sibonga isitayela, uqalile ukudonsa amehlo abathengi. Umzimba ukuma ezithakazelisa kakhulu, ngenxa yalokhu ukubukeka kuyinto ashukumisayo futhi okungavamile. Uma ingxoxo eningiliziwe imoto, kuyobe kubonakala kwemisipha ne enkulu. Lo mphumela ibangelwa esebenzisa ephakanyiswe phambi ingxenye, ububanzi okusezingeni eliphezulu, engavamile kulo mugqa bumper futhi ekhethekile embossed isondo nemengamo. Ukubuka nje ingaphandle, ungasho ngokushesha ukuthi imoto okunokwethenjelwa ngempela futhi zikhululekile. Umenzi wenza umsebenzi omuhle ukudalwa we Vaz-1119.
ukukhiqizwa Car waqala emuva ngo-2004. Umhlangano wenziwa WaseRussia, okungukuthi Togliatti. Imoto ngowomnikazi B. ekilasini Ngenxa yalokho, "Kalina" lithole okusheshayo ukunakwa ngokwanele kusukela Ongoti yezimoto. Umzimba setha hatchback hlobo. Ngenxa design ngcono umshini ihlangabezana nazo zonke izidingo zanamuhla namazinga ezihlobene nokuvikeleka. Ngokungafani umndeni "Samara", "Kalina" (VAZ-1119) has ukuzinza mkhulu futhi maneuverability ngcono ku egoba abukhali. Kwamanye ngombala imoto ukunikeza izinhlobo injini eziningana - 8 valve (1.6 L), ama-valve-16 (1.4 L 1.6 L). Wonke amayunithi abe ekhethekile electronic elawula uhlelo ukuthungela uphethiloli sishaye. uphethiloli uyakwazi aqukethe 50 amalitha.
Vaz-1119 Tuning yenziwe nokulindela abagibeli futhi umshayeli. Landing emotweni ukhululekile ngenxa yokuthi une wonke umnyango ukuvulwa kanye has a usayizi umxhwele kakhulu. Ukuphakama umshini ingase ikumangaze ngisho abantu abade iyohlala kahle nje gumbi. Izihlalo nazo zihlukaniswa induduzo anda.
Umenzi uye wazama ukwenza isikhundla ukushayela kuyinto ergonomic kakhulu futhi uvumelane nezindinganiso ze-European. Esihlalweni salon ifakwe kokwehla okusezingeni eliphezulu, isilawuli has interface okunengqondo futhi enembile. Uhlelo lokulawula ifakwe izinkinobho esikhethekile ukusebenza kangcono. Ngaphezu kwalokho, izici Vaz-1119 kusivumela ukusho ukuthi elingaphakathi senziwa isitayela engcono. Kube Ukuqaphela System Climate.
Ngo console isikhungo zingatholakala ibhokisi ukhululekile kakhulu futhi evulekile izinto. Kungaba ejwayelekile noma athuthukisiwe (kuye ngokuthi ukumiswa). I gumbi igilavu futhi uye washintsha abanye: ngijabulisa lesinqumo high. Ibhuleki lesandla wathenga ukusonga inkomishi umnikazi ukuthi ukhululekile kubagibeli labaqaphi elingemuva. Imibala main babe shades omnyama grey.
On iphaneli sensimbi i screen LCD (okuyinto okunengqondo). Siyabonga kuye, umshayeli "Kalina" (VAZ-1119) ubona amathiphu igiya.
Ukuthembeka kanye nokuphepha
Imoto elihlangabezana nazo zonke izidingo zokuphepha Russian nabaseYurophu. Umshayeli unikezwa i airbag ngisho kwesabelomali emshinini wakho. Ebandleni "Norm" siye sathuthukisa eziphuthumayo unyathela amabhuleki. Uma umshayeli akazange ngashona le ngebhande lemoto, le Vaz-1119 nakanjani iyoba ngalokhu.
I "okunethezeka" umthengi enikeziwe isimame. Lapho ushayela ohlelweni onguthelawayeka eziyinkimbinkimbi elawula isondo ngayinye ukubeka imoto isikhundla esiphansi. Umzimba senziwa elinama ngamandla anda.
I lobuchwepheshe ohlangothini imoto
Imoto iyakhona ukushaya umshayeli, njengoba umakhi ungeze injini entsha. Vaz-1119 kungenziwa ifakwe kokubili automatic transmission futhi mathupha. Kubathandi ILAC imoto efanelekayo, kokuba drive ikhebula. Umsebenzi usuke kwenziwa ezingeni izimoto European, uhlelo lusebenza kahle futhi ngokushelela. automatic transmission ogibele emotweni, elisuka Japanese, futhi ngenxa yalokho kuyahluka umthamo omkhulu umsebenzi. "Kalina" ihamba kahle nangokonga. Nokho, uma uthanda, uyakwazi bashiyele inzalo yabo yonke ekusakazeni edolobheni.
Ngo base umthengi uthola injini 1.6 litre, iyunithi yakhelwe 8 amasilinda. Ngaphezu kwalokho, umshini has a izici ehlonipheke kakhulu. Ikakhulukazi, it ifakwe eqinisa Amabha ukuphepha eyengeziwe, ibhande uhlelo ukuphakama ukulungiswa. Isevisi lobuchwepheshe kungenzeka repaint ngesivuno ngaphansi ekhishwa umbala emzimbeni, ukusungula isondo ezengeziwe (okuyinto ifakiwe). Esikhathini gumbi we ukulungiswa kungase kuqashelwe izihlalo ahlukene labaqaphi elingemuva.
Kukhona yonke imisebenzi ukuthi ayatholakala kwenguqulo evamile ye-"Kalina" umugqa. Hatchback Vaz-1119 ifakwe uhlelo sezulu, lock ukubopha, amandla kagesi (okungase kulawulwa kwideshibhodi), indawo yokubeka izingalo futhi isethi obengeziwe ezilengayo.
Injini ka 1.4 amalitha. Iyunithi inohlelo 16 valve. Ahlangana zonke amazinga eYurophu nase Melika.
Imoto ifakwe isethi ephelele uhlelo "UNorma." Kukhona ama-airbag umshayeli nomunye umgibeli, isihlalo Ukushisa, amawindi asebenza ngogesi, izibani othomathikhi, somoya wiper, okuyinto bona libangelwa imvula enkulu. Ukumboza wenza kusukela velvet; izibani inkungu kukhona LED. Nezinsimbi zakhiwe lithium. Umenzi umise ekhethekile yokupaka isiqondiso umsebenzi. Ogibele injini 1.6 amalitha.
Yangaphandle futhi bakhulise-umbono izibuko kulawulwa isibambo. Ngaphambi kokuba uqale ezihambayo, udinga ukufaka kubo ngendlela ukuthi ukubukeza elilungile.
Kungakhathaliseki ukuthi ukuthungela ivuliwe noma cha, ugwayi imisebenzi elula. Ngakho ukuthi waqala ukusebenza, kufanele kube "waminza" e egunjini elikhethekile. Ngemva ashisayo gxuma ukuxegiselwa imizuzwana 20.
Peaks ukuthi ukuvikela ngokumelene kwelanga lingasethwa ezindaweni ezintathu ezahlukene, njengoba umgibeli noma izifiso umshayeli.
Njengenjwayelo, abanikazi Chevrolet Cruze libuyekeza ukumangala.
Elikhulu futhi eziqinile Vnedrozhnik Nissan Patrol
Fashion mkhuba: Ombre ukudaya izinwele ezimnyama
Futhi niyazi ukuthi ungaphakathi ohlangothini lwesobunxele umuntu?